Kuqiniswe ezokuphepha ngezinsongo zabakwaJika Joe - Bayede News
Izakhamuzi ezigilwe wumlilo oshise imijondolo yakwaJika Joe eMgungundlovu ngoLwesithathu olwedlule sezisabise ngokungena ngodli ezakhiweni zokuhlala abantu ezingamafulethi zikaMasipala uMsunduzi
Lokhu kuphoqe ukuthi kuze kwandiswe isibalo sonogada lapho kwakhiwa khona la mafulethi angamaCommunity Residential Units (CRU) aseduze kwemijondolo kwaJika Joe.
Ngeledlule iBAYEDE ibikile ngomlilo ocekele phansi eminye yale mijondolo washiya abahlali dengwane.
Khona embikweni wangeledlule, omunye ohlala kwaJika Joe okhulume naleli phephandaba uveze ukuthi uma bengasizwa njengoba beshelwe bazongena ngodli kula mafulethi.
UMphathiswa woMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu KwaZulu-Natal, uPeggy Nkonyeni, uyalele iNhloko yoMnyango uMnu uMdu Zungu ukuba axwayise inkontileka eyakha lezi zindlu kanye noMasipala ukuqinisekisa ukuthi kuqiniswa ezokuphepha kule ndawo okusakhiwa kuyo.
UMhlonishwa uNkonyeni uthe: “NjengoHulumeni ngeke sikwazi ukuthi sibe nezinye izindlu ezikhokhelwa ngenyanga okuzongenwa kuzo ngodli kumasipala owodwa njengoba kwenzeka emafulethi ase-Aloe Ridge eWestgate ngoNhlolanja wezi-2018.”
Ngowezi-2018 ababengamalungu oMkhonto Wesizwe bangena ngodli ezindlini zikaMasipala ezikhokhelwayo okuze kube imanje uMkhandlu awukwazi ukubakhipha kunalokho laba baba nezinye izimfuno ezifaka phakathi ukuqashwa uMasipala nempela abanye baqashwa.
Okhulumela uMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu KwaZulu-Natal, uMnu uMbulelo Baloyi, uthe batshelwe yizisebenzi zaseMsunduzi ukuthi abanye abanikazi bemijondolo benqabile ukuthutha kuleya ndawo njengoba uMasipala ubungenelela uzama ukubasiza base besabisa ngokungena kula mafulethi.
Kula mafulethi bekunonogada abali-13 kodwa ngeSonto kunqunywe ukuba kwengezwe ngabali-10.
Uthe kunemibiko yonogada ethi bekunabantu abebedudula isango befuna ukufaka izimpahla zabo lapho kwakhiwa khona.
Uqhube wathi uHulumeni esebenzisana noMasipala kanye nezinhlangano ezingenzi inzuzo bahlezi belekelela izisulu zemililo yasemijondolo nangendawo yokuhlala okwesikhashana njengoba kwenzeka nangoZibandlela nyakene kuyo le ndawo.
Njengoba kuleli sonto bekunamakhaza ashubisa umkantsha, uBaloyi uthe ubuholi bedolobha buvume ukuba izisulu zikhoseliswe ehholo i-AF Wood ezinye endaweni yabangenamakhaya eyasungulwa ngoNdasa ngesikhathi kuqala ukhuvethe ukugcina abahlala emgwaqweni.
UBaloyi uthe emva kombiko ohlanganiswe ithimba lezinhlekelele esifundazweni, uMnyango uzosiza ngokuhlinzeka izisulu ngempahla yokwakha.
“Isicelo soxhaso sesithunyeliwe ehhovisi likaMphathiswa futhi lolu daba luthathwa njengoluphuthumayo ngoba sifuna ukubanikeza izimpahla zokwakha ngokushesha. Okusayinselelo ukungabi nomazisi kwabanye njengoba kukhona abalahlekelwa yibo ngesikhathi kusha ngesonto eledlule,” kusho uBaloyi.
Abemboni yezotshwala abaneme ngemigomo ebekiwe yokuhweba utshwala
Uthe izicelo abasazitholile zibalelwa ema-720 kanti isicelo ngasinye sizothola impahla ebiza izi-R8 000.
IMeneja yoMnyango Wezasekhaya ehhovisi eliseMgungundlovu, uMnu uXolani Maphumulo, ithe bayasebenzisana neMeya kaMasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebolla kanti basalinde ukuthola uhlu lwezisulu zomlilo bese bethumela ihhovisi eliwumahamba nendlwana lapho abashelwe bekhona ukuze bezokwazi ukufaka izicelo zomazisi abasha.
“Into esayinkinga izindleko zokukhishwa komazisi njengoba kudingeka ukuthi kukhokhwe. Kuwumdanti okuze kudinge ngisho imvume kaNgqongqoshe woMnyango uma umuntu engeke akhokhiswe,” kusho uMaphumulo.
Uthe ukwenza umazisi omusha kubiza i-R140 kanti isitifiketi sokuzalwa ama-R20.
Uqhube wathi bazohlela nababhekelele ezangaphandle ukuze kulekelelwe labo abalahlekelwe izincwadi zokuhambela kwamanye amazwe nezimvume zokuba kuleli.
Ezinye zezakhamuzi azilulindanga uxhaso lukaHulumeni njengoba sezibuyele kule mijondolo eziyivuse ngokwasala ngesikhathi kusha. Ezinye zibuyele emva kosuku kushile kusanentuthu neziphunzi zezihlahla zisashunqa.
Okhulume neBAYEDE ongowokufika kuleli nokho ongathandanga ukuthi igama lakhe lidalulwe uthe: “Ngeke kusisize ukuthi silokhu sincike kuHulumeni ngoba into ezokwenzeka uzosiza labo abakuleli ngokusemthethweni. Mina angizanga kuleli ukuzoganga futhi ngilapha emjondolo ngoba ngisondezela amathuba omsebenzi, ingakho ngizihlanganisela ukuze ngiqhubeke nokusebenza.”